Kaadị Ngwuputa RX580 maka gpu mining rig
Kaadị eserese ntinye ego na-akwụ ụgwọ dị oke ọnụ, na-eji chips AMD, nwere arụmọrụ dị mma na ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya, ike ịgbakọ usoro ihe osise nke otu kaadị eserese nwere ike iru 30m / s, teknụzụ nkwakọ ngwaahịa dị elu na usoro nnwale siri ike iji hụ na arụmọrụ ahụ dị. nke kaadị Ngwuputa Na-arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe dị mgbagwoju anya.
1. A na-eji kaadị ndị na-emepụta ihe na-emepụta ETH na-emepụta ihe na ụkpụrụ dị elu ma nwee ọdịdị pụrụ iche n'ozuzu ya;àgwà ahụ kwụsiri ike ma na-adịgide adịgide, na arụmọrụ na-akwụsi ike karị.
2. Kaadị ndịna-emeputa ihe ntinye ego bara uru, na-eji ibe AMD, arụmọrụ dị mma na àgwà a pụrụ ịdabere na ya.
3. Nke a ETH mining kaadị nwere abụọ na-agba ọsọ Fans, steeply curved agụba mee ngwa ngwa ikuku, na-enye a kwụsiri ike ala okpomọkụ dissipation ikuku, na hụ na kwụsiri ike ọrụ nke Ngwuputa kaadị.
Anyị nwere kaadị Ngwuputa mgbawa 588 n'ọtụtụ ụdị nkwakọ ngwaahịa.Isi foto na-egosi otu n'ime kaadị 588 nke Ngwuputa ihe.
Ncheta: Enwere ike iji kaadị eserese a naanị maka itinye ego ezoro ezo, adabaghị maka kọmputa ụlọ.
1. A na-eji kaadị eserese a maka ETH mining ọhụrụ?
Ee, ọ bụ ihe ọhụrụ, anyị ga-ebuga ya na nkwakọ ngwaahịa mmepụta ihe.
3. Gịnị kpatara ịzụta kaadị Ngwuputa n'aka gị kama ịzụrụ ndị ọzọ?
Anyị na-etinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ire ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine kemgbe 2015, ma nwee ahụmịhe mmepụta na ahụmịhe ahịa.Maka kaadị Ngwuputa GPU, anyị nwere ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa ọkachamara na ebe nyocha.A ga-eji igwe na-egwuputa ihe nwalee kaadị ngwuputa ọ bụla tupu ebuga ya iji hụ na ndị ahịa nwere ike iji ya na-ejikarị.
Nke gara aga: Ihe kacha dị ọnụ ahịa 55mm pitch 8 kaadị eth miner
Osote: Chassis mkpọtụ obere mkpọtụ na-akwado kaadị 3
Isi ihe eserese
Gosipụta usoro mgbawa
AMD RX 500 usoro
Ịrụ ọrụ nka
Ọnọdụ imebiga ihe ókè: 1294MHz
Ụdị egwuregwu: 1284MHz
Ngalaba Nhazi Stream
Nkọwapụta ebe nchekwa vidiyo
Ugboro ebe nchekwa vidiyo
Ụdị ebe nchekwa vidiyo
Ikike ebe nchekwa
obosara ebe nchekwa vidiyo
Ihe ngosi eserese
HDMI * 1 , DVI * 1 , DisplayPort * 1
Ndị ọzọ paramita
Ụdị kaadị eserese
Igwe fan abụọ na-ajụ oyi